Nanomboka ny fanamboarana ny orinasa Kioxia Fab7! Ny dingana voalohany amin'ny fananganana dia ho vita amin'ny lohataona manaraka - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Nanomboka ny fanamboarana ny orinasa Kioxia Fab7! Ny dingana voalohany amin'ny fananganana dia ho vita amin'ny lohataona manaraka
Nanomboka ny fanamboarana ny orinasa Kioxia Fab7! Ny dingana voalohany amin'ny fananganana dia ho vita amin'ny lohataona manaraka
Tamin'ny 25 febroary dia nanambara i Kioxia fa nanao lanonana famakiana tany tany amin'ny tranony tao Yokkaichi, Prefektur Mie, Japon, ary namaky tamim-pomba ofisialy ilay orinasa semiconductor faran'izay ela indrindra (Fab7).
Ny fanambarana an-gazety dia nanambara fa ny zavamaniry dia ho lasa iray amin'ireo zavamaniry mandroso indrindra eto an-tany, natokana ho an'ny famokarana ny fahatsiarovana tselatra 3D azy BiCS FlashTM. Ny fananganana ilay orinasa vaovao dia hizara roa, ny dingana voalohany dia kasaina ho vita amin'ny lohataona 2022.
Ny orinasa Fab7 vaovao dia fiaraha-miombon'antoka Kioxia sy Western Digital. Izy io dia handray rafitra manaitra sy manaitra ny tontolo iainana, ao anatin'izany ny fitaovana famokarana angovo farany be indrindra. Ny zavamaniry dia hanatsara kokoa ny fahaizan'ny famokarana Kioxia amin'ny alàlan'ny fampidirana ny rafitra mpamokatra mandroso AI.
Kioxia Fab7 Factory
Talohan'ity (20 Febroary) ity dia nanambara i Kioxia sy Western Digital fa ny roa tonta dia niara-niasa tamin'ny fampandrosoana ny haitao fahatsiarovan-tsarimihetsika 3D faha-162 sosona fahenina an'ny fahenina. Ny fanambarana an-gazety dia nanasongadina fa ity no haitao avo lenta avo indrindra sy avo lenta indrindra an'ny haino aman-jery 3D an'ny orinasa roa hatreto. Raha ampitahaina amin'ny teknolojia ho an'ny taranaka fahadimy dia nitombo 10% ny hakitroky ny sela marindrano. Raha ampitahaina amin'ny haitao 112-layer stacking, ity fandrosoana marindrano mihombo miaraka amin'ny fahatsiarovana mitsivalana miisa 162 dia mampihena ny haben'ny chip hatramin'ny 40% ary manatsara ny vidiny.
Nilaza i Kioxia fa nanorina fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny Western Digital nandritra ny taona maro izy ary manantena ny hanohy hampiasa vola amin'ny orinasa Fab7, ao anatin'izany ny famoronana fahatsiarovana fahatelon'ny 3D flash.